Somalia:Eedeynta loo jeediyay Jibouti oo ay ka hadleen – xukuumada,xildhibaano iyo Odayaal | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Baarlamaanka Soomaaliya, DJibouti, Muqdisho, SOMALI NEWS, TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:Eedeynta loo jeediyay Jibouti oo ay ka hadleen – xukuumada,xildhibaano iyo Odayaal
Xukuumadda KMG ee Soomaaliya ayaa ra’yi qofeed ku tilmaantay hadalkii dhawaan ka soo yeeray mudanayaal ka tirsan Baarlamaanka oo ay ku eedeeyeen dowladda waddanka Jabuuti.
Ku simaha R/wasaaraha ahna R/wasaare kugeenka iyo wasiirka Gaashaandhigga C/kaxiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo Radio Muqdisho wareysi siiyay ayaa sheegay in hadalkii ka soo yeeray guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka ee ahaa in Jabuuti ay dalka Soomaaliya fara gelineyso uu yahay mid ra’yigiisa ah oo aysan la qabin dowladda Soomaaliya iyo waliba shacabka.
Mudane C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi ayaa sheegay in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay rumeysan yihiin abaalna ka hayaan dowrka walaalnimada leh ee walaaha Jabuuti ay ka qaateen dhibaatada ka dhacday waddanka Soomaaliya iyo waliba taageerada aan xisaabneyn ee ay umadda Soomaaliyeed u fidisay Dowladda Jabuuti.
Wuxuu sidoo kale ku nuuxnuuxsaday dadaalka ay Jabuuti ku bixisay in ay Soomaaliya dib u hanato dowladnimo iyo sida ay u garab taagan tahay Dowlad kasta oo ay Soomaaliya yeelato, wuxuuna wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray xildhibaanada ku shiray Kenya ee uu horkacayay guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Baarlamaanka C/wali Ibraahin Sheekh Muuddey.
“Hadalkaas waa mid isaga u gaar ah, Dowladda iyo xukuumadda Soomaaliyeed lama qabaan warkaas, annagu waxaan Walaalaha Jabuuti u heynaa xushmad, Qaradin iyo waliba abaal ay noo galeen” ayuu yiri wasiirka Gaashaandhigga.
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka oo shalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sidan oo kale uga soo horjeestay hadalkaan ka yimid guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka,ayagoo codsaday in guddi heer qaran ah loo saaro in ay raali galin ka bixiyaan arrintaasi.
Qaar kamid ah Mudaneyaasha Golaha baarlamanka Soomaliya ayaa taageeray Go’aankii ay Xukumadda Soomalaiya ku soo jeedisay in dib loo dhigo muddada qabashashada Doorashooyinka madaxda sare ee dalka iyagoo dhanka kale ku baaqay in wafdi heer qaran ah loo diro raalli gelinta Madaxweynaha Jabuuti oo ay eedeeyeen Xubno ka tirsan Guddoonka baarlamanka iyo Xildhibaanno.
Xildhibaan Maxamed Sh Cali Woosh oo kamid ah guddiga Maaliyadda ee baarlamanka ayaa ugu horreyntii sheegay in uu ku raacsan yahay Xukuumadda in dib loo dhigo waqtiga Doorashada la qabanayo maadaama ay Xukuumaddu muujisay waxqabad aan la iska indho tiri karin.
Xildhibaan Woosh oo hadalkiisa sii wata ayaa dhanka kale ku eedeeyay Xubno ka tirsan Guddoonka baarlamanka inaysan hor keenin baarlamanka Go’aankii uu madaxweynuhu dib ugu soo celiyay baarlamanka muddo kororsigooda, kaas oo ku aaddaan muddo kordhintii sadexda sano ee ay horay ugu dhawaaqeen.
Dhanka kale Xidhibaan C/qaadir Faarax Karaama ayaa ugu baaqay Madaxda Dowladda inay Habboon tahay in wafdi heer qaran ah loo diro Madaxweyanaha iyo Dowladda Jabuuti si looga raalli geliyo Eedeyntii lagu deg degay oo ay ku dhawaaqeen Xubno uu kamid yahay Gudoonmiye ku xigeenka 1aad ee baarlamanka oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi.
Muqdisho – Axmed Diiriye oo ka mid ah Golaha dhaqanka iyo Midnimada Beelaha hawiye oo lahadlay BBCda ayaa sheegey isagoo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed inay raali galin ka bixinayaan eedeynta loosoo jeediyay Djibouti.
Odey Axmed ayaa sheegey inuu warbaahinta ula xiriiray inuu raali galiyo Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo Shacabka reer Jibuuti.
Raali galintan ayaa daba socota hadal ka soo yeeray Gud xig Baarlamanka.
Japan:About 24,000 dead or missing in March disaster Somalia:Faroole – “Ammaan darrida Puntland waxaa ka dambeeya Argagixiso”